Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 6
Ny singa fototra dia singa iray eo ambany sehatr'olombelona; Ny vatan'ny singa iray dia ahitana ny iray amin'ireo singa efatra. Noho izany ny teny elemental. ny dikany na ny endriky ny singa. Ireo filozofa amin'ny fampielezam-baovao mahazatra antsoina hoe Rosianina Rosiana dia mizara ny singa ho kilasy efatra, mifandray amin'ny kilasy tsirairay amin'ny iray amin'ireo singa efatra noraisin'izy ireo ho eto an-tany, rano, rivotra ary afo. Mazava ho azy fa tokony ho tsaroana fa ireo singa ireo dia tsy mitovy amin'ny singa midadasika misy antsika. Ny tany, ohatra, dia tsy ny zavatra hitantsika manodidina antsika, fa ny singa fototra izay fototra iorenan'ny tany. Ny Rosicrucian dia nantsoina hoe elemental ny tany, gnomes; ny rano, tsy misy; Ireo, ny rivotra, sylphs; ary ireo avy amin'ny afo, salamanders. Isaky ny ampahany amin'ny iray amin'ireo singa dia omena torolalana amin'ny eritreritra lalina amin'ny maha-olombelona, ​​io hevitra io dia mametraka ny endriny ao amin'ny singa manan-danja amin'ny natiora ary miseho ho toy ny singa miavaka amin'ny singa, fa ny vatany dia avy amin'io singa io. Ireo singa fototra izay tsy noforonin'ny eritreritr'olombelona tamin'ity vanim-potoanan'ny evolisiona ity dia nihevitra ny maha-izy azy, noho ny fahatsapana tao anatin'ny vanim-potoanan'ny evolisiona teo aloha. Ny fananganana singa fototra iray dia vokatry ny saina, olona na universal. Ireo singa fototra fantatra amin'ny hoe elementals ety dia misy kilasy fito, ary ireo izay miaina anaty lava-bato sy tendrombohitra, amin'ny toeram-pitrandrahana sy ny toerana rehetra eto an-tany. Izy ireo no mpanorina ny tany miaraka amin'ireo mineraly sy metaly. Ny tsy fahamendrehana dia miaina anaty loharano, renirano, ranomasina, ary amin'ny rivotra eny amin'ny rivotra, saingy mila rano maromaro, rivotra sy afo ny singa fototra mba hamokarana orana. Amin'ny ankapobeny dia mitambatra ny karazany roa na mihoatra ny singa fototra mba hamoahana ny tranga voajanahary. Noho izany, ny kristaly dia miforona avy amin'ny tany, ny rivotra, ny rano, ary ny singa fire. Toy izany koa ny vatosoa. Ny silfia dia mivelona eny amin'ny rivotra, eny amin'ny hazo, eny amin'ny voninkazo eny an-tsaha, amin'ny kirihitra, ary amin'ny fanjakana rehetra. Ny salamandera dia avy amin'ny afo. Lasa misy ny lelafo noho ny fisian'ny salamander. Ny afo dia mampiseho maso tsara. Rehefa misy lelafo dia mahita ampahany amin'ny salamandre isika. Ireo singa fireharehana no tena tsy ilaina. Ireo efatra ireo dia miara-mikambana amin'ny famokarana afo, tafio-drivotra, tondra-drano ary horohoron-tany.
Inona no dikan'ny hoe 'zon'olombelona?' Misy fahasamihafana eo aminy ve?
Ny singa maha-olombelona dia ny maha-olona izay misy ifandraisany amin'ny maha-olona voalohany azy ary amin'ny maha-izy azy amin'ny maha-olona tsirairay azy amin'ny fananganana ny vatany. Mijanona ao anatin'ireo fahatsiarovana rehetra ao an-tsaina izy mandra-pahatongany, amin'ny alalan'ny fifandraisana lava amin'ny saina, mandray ny orona na ray amin'ny fahatsiarovan-tena. Tsy avy any an-tsekoly intsony izao ny olombelona, ​​fa ny saina ambany kokoa. Avy amin'ny elanelan'ny olombelona no tonga ny linga sharira. Ny elementalin'olombelona dia izay ao amin'ny "Fotopampianarana miafina" antsoina hoe "bharishad pitri", na "razambe linare", ny mason'ny olombelona, ​​ny Igo, dia avy amin'ny pitia agnishwatta, ny filalaon'ny masoandro, zanaky ny masoandro.
Ny olombelona tsirairay dia mifehy azy rehetra. Ny sharira linga dia ny automaton izay manatanteraka ny fanirian'ny olombelona. Ny Pitri Bharishad dia tsy maty amin'ny fahafatesan'ny vatana, toy ny linga sharira. Ny sharira linga, ny zanany, dia novokarina avy tamin'izany ho an'ny tsirairay. Ny bharishad dia toy ny reny izay miara-miasa amin'ny sain'ny fanahy mipoitra indray na Ego, ary avy amin'io fihetsika io no mamokatra ny linga sharira. Ny elementalin'olombelona dia mifehy ny asa rehetra voatonona ao amin'ilay fanontaniana, saingy ny singa tsirairay dia tanterahana amin'ny singa iray samihafa. Ny singa fototra ao amin'ny taova tsirairay ao amin'ny vatana dia mahafantatra sy mifehy ny fiainan'ny olona izay manao an'io taova io, ary manatanteraka ny asany, saingy tsy mahafantatra na inona na inona amin'ny endriky ny taova hafa rehetra, fa ny elementalin'olombelona kosa mahita fa samy manao ireo asa ireo avokoa ary mifankatia tsara. Ireo fihetsika tsy manara-penitra rehetra amin'ny vatana toy ny fofona, ny fitsaboana, ny fikotranana, ny rehetra dia tarihin'ny olombelona. Io no asan'ny bouddhisika ao amin'ny vatan'ny olombelona. Ao amin'ny Editorial momba ny "Consciousness," The Word, Vol. Izaho, pejy 293, Voalaza fa: "Ny toe-javatra fahadimy dia ny sain'olombelona na I-am-izaho. Nandritra ny taona maro tsy hita isa, ny atoma tsy mety lo izay nitarika atôma hafa tao amin'ny mineraly, tamin'ny alàlan'ny legioma, ary hatramin'ny biby, dia tonga tamin'ny farany ny toe-javatra avo lenta izay hita taratra tamin'ny fahatsiarovan-tena iray. Ny maha-maha-olom-pirenena ahy ary manana ny fisaintsainana ny fahatsiarovan-tena ao anatiny, dia mieritreritra sy miresaka momba azy tahaka ahy, satria izaho no mariky ny iray. Ny sampan'olombelona dia eo ambanin'ny fitarihany ny vatana biby voalamina. Ny enti-biby dia manosika ny taova tsirairay mba hanao asa manokana. Ny sampan'ny orana tsirairay dia mandefa ny efitrano tsirairay hanao asa iray. Ny fiainan'ny sela tsirairay dia mitarika ny molekiola tsirairay amin'ny fitomboana. Ny famolavolana ny molekiola tsirairay dia mametraka ny endriny tsirairay amin'ny endrika milamina, ary ny fahatsiarovan-tena dia manaitra ny atoma tsirairay miaraka amin'ny tanjon'ny fahatsiarovan-tena. Ny atôma, molekiola, sela, taova, ary biby dia samy eo ambany fitarihan'ny saina avokoa - ny toe-tsaina mihevitra ny tenany manokana-izay fiheverana izay heverina. Saingy ny saina dia tsy tonga amin'ny fahatsiarovan-tena, izay fampandrosoana tanteraka azy, mandra-pandefany sy hifehezany ny faniriana rehetra sy ny fahatsapana voarainy amin'ny alalan'ny eritreritra, ary mifantoka amin'ny eritreritra rehetra momba ny fahatsiarovan-tena araka izay hita taratra ao aminy. "Ny bharishad dia ny sainan'ny Ny vatana toy ny agnishwatta pitri dia ny fanahin'ny sainy. "Misy rafitra mifehy ny faniriana ve?" Tsia. Ny kama rupa dia manana fifandraisana mitovy amin'i Ego toy ny linga sharira amin'ny zon'olombelona. Amin'ny fotoana fotsiny ny sharira linga dia ny vatan'ny vatana, ny kama rupa dia ny automaton ny faniriana turbulent izay manetsika izao tontolo izao. Ny fanirian'izao tontolo izao dia manetsika ny kama rupa. Samy mitoka-monina avokoa ny singa tsirairay mandeha any amin'ny kama rupa. Noho izany dia mihetsiketsika ny lara sharira ary manetsika ny vatana araka ny baiko na baikin'ny olombelona elemental, ny kama rupa, na ny ego.
Tsy misy zavatra toy ny asa tsy mahatsiaro na fihetsika. Fa na dia tsy mahatsapa ny asany na ny asan'ny vatany aza ny olombelona, ​​dia azo antoka fa ny mason'ny tarika na ny asany no miahy, raha tsy izany dia tsy afaka miasa izy. Ity singa iray ity dia tsy manatanteraka ny asany na ny asan'ny vatana foana. Ohatra, ny zon'olombelona dia mitarika ny vatana manontolo amin'ny ankapobeny na dia mety tsy ho tsapany aza ny fihetsika mivantana sy ataon'ny tsirairay amin'ny vatana mena.
Ny valiny dia eny amin'ny fanontaniana roa. Ny vatan'ny olombelona no trano fianarana ho an'ny singa rehetra. Ao amin'ny vatan'ny olombelona ny kilasy rehetra ao amin'ny singa rehetra dia mandray lesona sy torolalana; ary ny vondron'olona dia ny oniversite goavana izay ahafahan'ny singa rehetra misaraka amin'ny diplaoma. Ny mason'ny olombelona dia mandray am-pahamendrehana ny tenany ary eo am-piandohany, tahaka an'i Ego, dia mitarika loharanom-pitaovana iray hafa izay lasa olombelona, ​​ary ireo singa fototra ambany rehetra, tahaka ny ataon'ny Ego ao amin'ny vatana ankehitriny.